स्टेरियोप्रकारदेखाउनुहोस् - बानी कार्यहरू एक विशिष्ट अनुक्रम, कार्यात्मक सम्बन्ध र वातानुकूलित reflexes को माध्यम द्वारा मिलाएका छौं। मा मानव मस्तिष्क दिन को समयमा stimuli को एक विशाल आम आउँछ। यो, उदाहरणका लागि, विभिन्न घटना र घटनाहरू, रंग, गन्ध र रंग हुन सक्छ। यी सबै अस्तव्यस्त impulses systematized र एकीकृत सिस्टम मा राखिनेछ। उदाहरणका लागि, प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो दैनिक दिनचर्या, जो कठोर वा लचिलो या त हुन सक्छ छ।
व्यक्तिगत जीवन एक निश्चित रूपरेखा मा राखिएको छ। यस्तो प्रणाली अस्तित्व स्थिर अवस्था मा एक ठोस र अक्रिय बन्नेछ। यो पनि परिवर्तन प्रक्रियाहरू संग चल्ने हुन सक्छ।
गतिशील स्टेरियोप्रकार प्रसिद्ध वैज्ञानिक आई पी Pavlovym खोलिएको थियो। उहाँले आफ्नो काम मा प्रयोग सकारात्मक र नकारात्मक stimuli को एक निश्चित अनुक्रम, सविस्तार वातानुकूलित reflexes द्वारा पछि लागे। अन्तिम परिणाम केही आन्तरिक प्रक्रियाहरू को राम्रो-समन्वित प्रणाली छ एक गतिशील स्टेरियोप्रकार, प्रदर्शन गरेको छ।
एक श्रृंखला कारण गर्न वातानुकूलित reflexes, यसलाई stimuli को थालनी अभिन्न सिस्टम प्रयोग को प्रभाव पूरा गर्न आवश्यक छ। यो पहिलो संकेत लागू गर्न suffices - र सहज क्रिया-चेन एक स्वचालित तरिका पालन गर्नेछन्।
गतिशील स्टेरियोप्रकार आध्यात्मिक र भौतिक बल संरक्षण गर्न आवश्यक छ। तपाईं दैनिक गतिविधिहरु को एक उदाहरण दिन सक्छन्। मानिस, बस एक निश्चित काम mastering, उहाँले सेना को धेरै यसको कार्यान्वयन मा बिताउनुहुन्छ। व्यावसायिक पनि पहिले नै स्वचालित कार्यप्रवाह सिकें र आफ्नो काम सजिलो, अधिक कुशल र थप competently बनाउँछ।
पर्याप्त गाह्रो Reframe। यहाँ आई पी Pavlov अर्को महत्त्वपूर्ण आविष्कारको गरे। सजिलो संकट वा मानव स्नायु प्रणाली को कठिन परिस्थितिमा कार्यहरू सामान्य अनुक्रम गर्न, भन्दा स्टीरियोटाइप तोड्न। व्यक्तिगत नयाँ, पनि कमजोर stimuli भिज्न धेरै गाह्रो छ। समय नयाँ लामो पासेसहरू को समय देखि स्टेरियोप्रकार खरिद अघिल्लो प्रतिक्रिया फर्के। नयाँ Workflows विकास गर्न कमजोर वा debilitated जनावर neurosis हुन सक्छ।
आई पी Pavlov गतिशील स्टेरियोप्रकार र मानव गतिविधिहरु गाँसिएको। प्रमाण रूपमा उहाँले प्रत्येक व्यक्तिगत जीवनको विशिष्ट, परम्परागत तरिका छ भन्ने तथ्यलाई उद्धृत। यो पूरा मा एक अनुक्रम हुन सक्छ को काम अनुसूची , सुत्ने, खाने आराम।
आई पी Pavlov जो हुन्छ, एक शारीरिक आधार गंभीर आत्म-जागरूकता बाँधिएको जब जीवनको परम्परागत तरिका परिवर्तन प्रियजनहरूलाई को हानि, विश्वास र worldview परिवर्तन। तिनीहरूले वास्तविकता गर्न अब पर्याप्त छन् रूपमा पूर्व गतिशील STEREOTYPES, बिग्रनु, छ, र त्यसपछि neurosis सुरु हुन्छ।
यो कार्यहरू र प्रतिक्रिया को सामान्य अनुक्रम अक्रिय छैन भनेर टिप्पण लायक छ। बाह्य वातावरण को प्रभाव अत्यधिक impermanent छ किनभने यो परिवर्तन। STEREOTYPES को गठन कडा शिक्षा असर गर्छ। त्यसैले, एक व्यक्ति राखिदिन सक्छन् willpower मेहनत, आदि
आई पी Pavlov पनि, स्थापित कमजोर शरीर लागि विशिष्ट को STEREOTYPES ट्याप गर्नुहोस् टिप्पणी। उदाहरणका लागि, यो वृद्ध मा कार्यहरू र प्रतिक्रिया को सामान्य अनुक्रम परिवर्तन गर्न व्यावहारिक असम्भव छ।
सामाजिक स्टेरियोप्रकार पनि छ। यो मान्छे को केहि समूहहरु बारेमा सामान्य विचार को सरलीकृत प्रणाली हो। त्यसैले, एक निश्चित समुदायको एक व्यक्ति आफ्नो प्रकृति बिना आफ्नो समूह अग्रणी को गुणहरू संग endowed छ। त्यो मान्छे व्यक्तिगत को आषा व्यवहार आशा छ। अक्सर, राष्ट्रिय धार्मिक र जातीय समूहहरू सन्दर्भमा सामाजिक स्टेरियोप्रकार।
चमत्कार विहार। को Kremlin मा Chudov विहारको: इतिहास
को संकेत सिक्ने। के को लागि घर मा ants?
वृद्धि के हो? यो मात्र होइन anthropometric सूचकांक छ
पति र पत्नी को godparents हुन सक्छ? गरेको बुझ्न गरौं
कलात्मक निष्ठा गोर्की कथा को आधारको रूपमा पुरानो महिला Izergil को छवि
डाँडा वा एक देशको घरको लागि बिर्सिएको रेलिङ उत्तम विकल्प हो
रेस्टुरेन्ट "सावा", Noginsk ठेगाना, मेनु, वितरण, समीक्षा
एक HYIP के हो र यो तिनीहरूलाई बनाउन सम्भव छ कि छैन भनेर?
वेंटिलेशन सिस्टम: स्थापना र मर्मतका। डिजाइन, निर्माण, स्थापना र वेंटिलेशन प्रणाली र हावा-कंडीशनिंग प्रणाली को संचालन
देश क्लब "Laci" - नयाँ मास्को मा आधुनिक रिसोर्ट
रजोनिवृत्ति "Klimadinon" को लागि उपाय: निर्देशन, एक संक्षिप्त विवरण